Kugara Kamuri mazano - Girazi Dining Tafura | Art sens - mazano eimba nebindu
17.01.2019 Yakatumirwa na: Art Sense
Pfungwa dziripo dzekurongedza nzvimbo mumba yekutandarira dzive nechirevo chimwe chete - tafura yekudyira girazi. Kunyangwe tafura yechinyakare yekudyira matanda yakakurumbira mune zvemukati magadzirirwo eimba yekudyira seimwe imba yekudyidzana kana sechimwe chikamu cheimba yekutandarira nekicheni, kushandiswa kwegirazi yakatsamwa hakusisiri kwakanyanya uye kwakajairika. Kunyangwe kushanda kwakadaro kune mikana yayo mune mamwe mamiriro, iwo anove simba mune vamwe. Iyo fragility iyo iri kunetsa kune vamwe ndiyo Ethereal uye inoyevedza rutivi rweiyi kona inomanikidzwa yemukati. Kana kubuda pachena kusingadiwe nevamwe, saka kune vamwe mukana wekuti chiedza chipfuure kuburikidza chisina kuvakwa uye kwete kuvhara vhoriyamu, sezvinoita mukuru kana kabhodhi fenicha. Kune rimwe divi, dambudziko rekusanganisa girazi pamwe nezvimwe zvakasara fenicha iri, iri pachayo, yekugadzira nguva yekugadzira. Iyo countertop yakadaro inogona kuve yakabatanidzwa nematombo, zvidhinha, simbi, huni uye nevamwe nenzira inowirirana uye chero maitiro aunosarudza. Heano mimwe mienzaniso yekushandisa:
artistic yemukati, imba yekudyira dhizaini, turakiti rezuva nezuva, mazano eturakiti rezuva nezuva, mazano emukati, mazano ekudya kwekushongedza, imba yekudyira mazano, tafura yemazano, zvemukati mhinduro, pachena mushe, tafura yegirazi, tafura yekudyira, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Iyo yemukati yakachena nekuti ndeyazvino
Ichena inokwezva nekuchena kwayo uye nyoro. Iyo yemukati machena ichenesa mitsara, inogadzira ...
Nzvimbo dzakanaka dzemazuva ano
Dzimwe pfungwa dzakanaka dzenzvimbo yemoto yemanje mune yemukati yemukati. Zvinoratidzwa umbozha uye nyaradzo. Izy ...
Imba yekugara munzvimbo yegirini
Zvinotendwa kuti girini inopa pfungwa yekuchengetedza uye, nekuwedzera, ine maitiro anobatsira pa ...